Sokajy: Trano sy trano
Saika ny ankizy kely rehetra dia maniry trano filalaovana. Tianao ve ny mampihetsika ny tontolon'ny olon-dehibe ary inona no mety ho tsara kokoa noho ny fanananao ny trano filalaonanao?
Playhouse - ny safidy mety
Fa tsy mora ny mahita trano sahaza ny zaza homena avy amin'ny safidy lehibe. Misy trano filalaovana vita amin'ny hazo sy trano filalaovana vita amin'ny plastika. Ny fanapahan-kevitra voalohany no tokony horaisina eto.
Mividiana trano fandraisam-bahiny - Sary avy amin'i Pixabay
Trano filalaovana plastika
Tombony azo avy amin'ny plastika fa mora voasasa izy io raha toa ka mampiasa rantsan-tanana maloto ny trano. Ho fanampin'izany, maharitra ela be izy io, milamina ary matetika be loko. Ho fanampin'izay, ny trano filalaovana dia azo hatsangana na ao an-trano na any ivelany.
Mampalahelo fa manana fatiantoka ny plastika fa raha ivelan'ny trano ny ankamaroany, dia ho faty ny masoandro ary ho lasa matt ny loko manankarena, indrindra amin'ny fahavaratra. "Playhouse - Inona no hotadiavina rehefa mividy" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 4. September 2021 5. September 2021 Sokajy Trano sy tranoKeywords milalao, teatra, PlayhouseLeave a Comment amin'ny trano filalaovana - inona no hotadiavina rehefa mividy
Fampiononana bebe kokoa, tahiry bebe kokoa amin'ny vidin'ny angovo ao an-trano ary maoderina bebe kokoa - ny fahalianana amin'ny fiainana manan-tsaina dia mitombo eo amin'ny mponina. Ary na iza na iza izay tsy mbola nifampiraharaha tamin'ny zavatra azon'ny tranony atao ho trano marani-tsaina dia ho gaga izy.
Fiainana manan-tsaina noho ny trano manan-tsaina
Sa efa naheno momba ny rafitra fanafanana manan-tsaina? Na momba ny zava-misy fa ny milina fanasan-damba dia manome fatra ny habetsaky ny lamba malefaka, miankina amin'ny haloton'ny fanasan-damba?
Trano Smart - trano sy zaridaina - © Dan Race / Adobe Stock
Momba ny masinina kafe manomana kaposy miaraka amina baikon'ny feo ary avy eo manafatra tsaramaso bebe kokoa? Tsia, tsy avy amin'ny sarimihetsika Hollywood ho avy ireo zavatra ireo, fa efa ela no nisy! Ny zavatra mety fotsiny ho an'ny olona mafana fo ara-teknika rehetra.
Ampifanaraho amin'ny fomba tsara indrindra ny tranonao manokana
Ekena fa mety mampatahotra kely ilay izy rehefa miseho tampoka eo am-baravarana miaraka amin'ny vovo-paosy fanasana ny paositra satria ny milina no nanamboatra azy indray. Na eo aza izany, ny gimikika toy izany dia tena ilaina tokoa. Izay mieritreritra ny fiarovana ny angon-drakitra ananan'ny mponina tsirairay amin'izao fotoana izao dia mazava ho azy fa mieritreritra amin'ny lalana tokony haleha. "Fiainana manan-tsaina amin'ny trano hendry" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 15. May 2021 5. September 2021 Sokajy Trano sy tranoKeywords fiainana manan-tsaina, Smart Home, Technik, velonaLeave a Comment amin'ny fiainana manan-tsaina miaraka amin'ny trano mahira-tsaina
Amin'ny fotoana hidiranao trano na trano vaovao tianao hofan-trano na ividiananao dia tokony hitsambikina ilay antsoina hoe spark. Rehefa mijery akaiky ianao ary mijery ny toerana, dia tokony hahatsapa tena mafy ianao fa afaka mahita ny tenanao ao amin'ny efitrano maharitra.
Mahatsiaro ho tsara ao an-trano
Ny safidinao dia manapa-kevitra raha afaka mahazo aina ianao amin'ireto efitrano ireto. Tsara be daholo izany, toa tsara daholo: trano fandraisam-bahiny lehibe, fatana mahafinaritra, zaridaina tsara tarehy, lakozia maoderina tsara - toa nofinofy tanteraka izany!
Tokony hahatsapa ho mahazo aina ianao ao amin'ny trano fonenanao - © Dan Race / Adobe Stock
Na izany aza, ho hitanao tsy ho ela fa misy zavatra tsy ampy. Tsy misy toerana hialana, tsy misy toerana hidirana ao, izay ahafahanao manelingelina. Tsy dia tsara na mety intsony izao. Na ny fatana aza tsy hafanana fa mangatsiaka fotsiny.
Inona no nitranga? Miezaka mamantatra izay tsy nety ianao, fa tsy mahita valiny. Ny fahatsapana ihany no milaza aminao: Tsy ato an-trano aho eto! Fa inona no tena dikan'ny hoe "ao an-trano"? Inona no mahatonga ny efitrano iray hahafahanao miteny hoe: mahazo aina aho ao an-tranoko!
Ny zavatra voalohany tokony ho tsapanao dia ny trano tsy misy ifandraisany amin'ny efitrano fandraisam-bahiny sy zaridaina, ao anatin'izany ny am-patana na lakozia avo lenta.
Ny trano dia mety ho toerana ahatsapantsika fa mahazo aina XNUMX%, afaka milamina tsara ary iray amin'ireo olona sy ny toerana misy antsika.
Ny tsirairay, ny iray hafa kely kokoa, dia mitady filaminana sy filaminana, fiarovana ary hafanana amin'ny rindriny efatra. "Torohevitra fanomanana | Mipetraka " Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 20. Aogositra 2020 5. September 2021 Sokajy Trano sy tranoKeywords hametraka, Torohevitra fanomanana, velona, trano, ao an-trano, an-tranoLeave a Comment manome torohevitra | monina